Rampow xirayaasha dhammaan baahiyaha xagaagan | War gadget
Rampow xirayaasha dhammaan baahiyaha xagaagan
Miguel Hernández | | Gargaarka, qalabka
Xagaagu waa imanayaa oo weheliyaa Dhibaatadu waxay tahay marka aan ku jirno xilligan xaadirka ah dhammaan qalabyada aan ugu baahanahay safarka, xeedho kombiyuutarka, xeedho smartwatch, xeedho casriga ... Waalan waali ah! Marka maanta waxaan ku tuseynaa waxyaabo kale.
Rampow waa shirkad soosaara Aasiya ah oo soosaara noocyadeeda kala duwan, markan waxaan soo bandhigeynaa liistada xeedho isku dhafan oo kula socon kara xagaagan. Soo hel sedexdaan bedel ee aan ku tusinayno shakina kuma soo gali karo si looga fogaado in shandadaada ay ka buuxaan fiilooyin.
1 Bixinta Awoodda iyo Bixinta Degdega ah 3.0
2 Delivery Power 3.0 iyo ilaa 36W
3 Degdeg deg ah 3.0 illaa 39W
Bixinta Awoodda iyo Bixinta Degdega ah 3.0
Waxaan ku bilaabaynaa wax badan, xeedho-sameeyahaani wuxuu leeyahay laba dekedood, Bixinta Awooda USB-C iyo Qualcomm USB-A Quick Charge dekedda 3.0. Tani waxay noo xaqiijineysaa awood dhan ilaa 36W iyada oo kuxiran aaladda aan isticmaaleyno. Tani waxay noo oggolaan doontaa oo keliya inaan lacag ka qaadno aaladaha moobiilka sida iPhone ama Samsung Galaxy S20, laakiin waxaan sidoo kale awoodi doonnaa inaan lacag ka qaadno laptop-yo qaarkood sida MacBook Air ama Apple's MacBook. Taasi waa sababta aan uga hadalno xeedho-dhaqameedkaas sida ugu ballaadhan ee aan maanta uga hadlayno.
Adeegso lambarka I7AXQC5L waxaadna heli doontaa qiimo dhimis 32% ah, oo uga tagi doonta 13,79 euro. > LINK Iibso
Xeedho waxaa lagu iibsan karaa laba midab oo kala duwan, cad iyo madow, in kasta oo aan had iyo jeer ku talinaynaa madow for cimri dherer. Waxay leedahay nidaam kahortaga culeyska xad dhaafka ah noocyadiisa kala duwan, iyo waliba nidaam ka hortagaya wareegyada gaagaaban si looga hortago inay gaaraan qalabkeena gacanta ee qaaliga ah. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in laga qaado taleefannada casriga ah xeedho wanaagsan. Sidee ayey u noqon kartaa si kale, waxaan sidoo kale leenahay nidaam ilaalin heerkulka sare, maaddaama oo si dhakhso ah loogu soo oogo dhammaan noocyada kala duwan ay sababi karto kuleyl xad dhaaf ah aaladaha qaarkood.
Delivery Power 3.0 iyo ilaa 36W
Waxaan hadda ka hadleynaa kuwa ugu "casrisan". Waxaa si gaar ah loogu talinayaa in lagu dalaco aaladaha mobilada ee leh dekedda USB-C. Waad ku mahadsan tahay labadeeda USB-C Power Delivery 3.0, waxay awood u leedahay inay bixiso 3 amps deked kasta, sidaas awgeedna lagu gaaro lacag-bixin deg deg ah 3.0. qalabka oo dhan isku mar. Waxay leedahay nidaam lagu ogaanayo aaladda caqliga leh, tani waxay ka dhigan tahay inay sidoo kale awood u yeelan karto inay aqoonsato haddii aan isku xireyno, tusaale ahaan, laptop-ka oo markaa aan siinno awoodda lagama maarmaanka ah, in kasta oo ay taasi tahay waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho mid ka mid ah USB-C dekedaha. Waxay ku maamuli doontaa qalabka wax ka badan ama ka yar awoodda lagama maarmaanka ah, illaa 30W isku mar.
Adeegso nambarka SD8VKNQB waxaadna yeelan doontaa qiimo dhimis dhan 35, waxaad ku iibsan kartaa oo keliya € 13,65> LINK IYADII
Sida aaladaha kale ee Rampow ee aan maanta ka hadlayno, waxaan ka difaacnaa culeysyada xad dhaafka ah, ka hortagga wareegyada gaagaaban iyo heerkulka sare. Iyada oo xeedhohan oo gaaraya illaa 36W aan awoodi doonno inaan qalabka ka qaadno hareeraha 70% wuu ka dhaqso badan yahay sida aan ula socon lahayn xeedho 5W-ta caadiga ah oo qalab badan ay ku jiraan. Intaa waxaa sii dheer, Rampow wuxuu bixiyaa dammaanad "cimri dherer" sida lagu qeexay kaarka ku jira xirmada. Si la mid ah adapters kii hore ee ku xusan qodobkaan, waxaan leenahay labo midab oo aan kala doorano inta udhaxeysa cadaanka iyo madow, midkee ayaad ugu jeceshahay?
Degdeg deg ah 3.0 illaa 39W
Waxaan hadda ka hadleynaa kan ugu awoodda badan, xeedho Rampow ah oo bixisa illaa 39W awood, awood u leh inuu si caqligal ah u keeno awoodda lagama maarmaanka ah haddii qalabku uu leeyahay isku-qaadasho deg-deg ah 3.0 iyo haddii kale Sidaa si la mid ah, waxay ka difaacaysaa danabyada iyo iska caabbinta heerkulka sare, kama filan karno wax ka yar shey la caddeeyey oo awood la mid ah leh. Waxaan jecelahay inaan xoojiyo muhiimadda ay leedahay adeegsiga xeedho-sameeyeyaal si fiican loo sameeyey markii la isku xidhayo aaladahayaga, maaddaama oo aan ku badbaadinayno noocyada agabyadaas ah inay naga khasaari karto xanaaq weyn.
RAMPOW Kharashka Degdega ah ee 3.0 ...
Markan waxaan kaliya ku haysan karnaa madow, laakiin waxay leedahay naqshad isku dhafan oo aan xannibi karin fiilooyinka kale, sida lagu sameeyo noocyada kale ee xeedho aad u waaweyn. Waxay guud ahaan la jaan qaadaysaa aaladaha sida iPhone 11 Pro ama Huawei Mate 30 Pro tusaale ahaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Rampow xirayaasha dhammaan baahiyaha xagaagan
Waa maxay antivirus-ka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee kombuyutarka shaqeeya?
Moshi Otto Q + Vortex 2: Xeedho Xawli Dheereeya